Qaramada Midoobey oo war ka soo saartay dagaalka Itoobiya | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Qaramada Midoobey oo war ka soo saartay dagaalka Itoobiya
Qaramada Midoobey oo war ka soo saartay dagaalka Itoobiya
Wararka sheegaya in dad badan oo rayid ah lagu laayay gobolka Tigray ee ku yaalla waqooyiga Itoobiya “waxaa uu u dhigmaa dambiyo dagaal” haddii la xaqiijiyo, waxaa sidaasi ka digtay madaxa guddiga Qaramada Midoobey u qaabilsan xuquuqda aadanaha.
Michelle Bachelet ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo wararka sheegaya in laga yaabo in boqollaal qof lagu dilay hal magaalo.
Rai’sul wasaare Abiy Ahmed ayaa ku eedeeyay in xasuuqaasi ay geysteen xoogag daacad u ah hogaamiyayaasha Tigray.
Saraakiisha TPLF ayaa waxay beeniyeen in arrintani ay ku lug lahaayeen.
Hogaamiyaha Tigray Debretsion Gebremichael ayaa u sheegay wakaaladawararka ee AFP in eedeymahani ay yihiin “kuwa aan sal iyo raad toona laheyn”.
Mr Abiy ayaa waxaa u sheegay in dagaalyahanada (TPLF), ay dhibaatadan geysteen ka dib markii ciidamada fedaraalka ay ka ” xoreeyeen” Koonfurta gobolka Tigray, ka dib na ay “si arxan daro ah u laayeen ” dad rayid ah oo aan waxba galabsan islamarkana ku sugnaa magaalada Mai-Kadra.
Dad goobjoogayaal ah ayaa waxay xoogagga daacadda u ah TPLF ay ku eedeeyeen dilalkii dhacay Isniintii, sida ku xusan warbixin ay soo saartay hay’adda Amnesty International.
Haddii la xaqiijiyo in dad badan oo rayid ah la laayay waxay noqoni doontaa markii ugu horreysay oo tan iyo inti uu dagaalka bilaabmay dad rayid ah oo badan hal mar la dilo.
Waxaa aad u adag in warar laga helo goobaha uu dagaalka ka socdo, sababtoo ah waxaa go’an khadadka taleefoonada iyo adeegga internetka.
Xoogagga Tigray ayaa waxay sheegeen inay soo dhaweynayaan baaritaan caalami ah oo madaxbanaan oo lagu sameeyo dhacdadani.
Ms Bachelet ayaa sheegtay “inay ka walaacsan tahay” xaaladda Itoobiya, balse waxay intaa ku dartay in “mudnaanta koowaad” ay imika tahay sidii dagaalka loo joojin lahaa si looga hortago xadgudubyo dhaca.
Dhanka kale waxaa sii kordhaya dadka ka qaxaya dagaalada ka socda gobolka Tirgey ee waqooyiga Itoobiya.
Previous articleItoobiya oo Somaliya uga yeertay ilaa 3,000 oo askari si ay uga Qeyb qaataan Weerarka lagu Hayo Maleeshiyaadka Tigreega
Next articleAxmed Madoobe oo u Hambalyeeyay Madaxweynaha cusub ee HirShabeelle
Wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Gobolka Tigray ee Dagaalka ka socda
Waa ay adagtahay in la xaqiijiyo wararka kala duwan ee kasoo baxaya gobolka waqooyiga Itoobiya ku yaalla ee Tigray halkaas oo uu dagaal ku...
Daahir Geelle: “Arrin aan labo sano ka hor ka diiday Farmaajo...
Trump oo maxkamad ka billaabay dagaalka doorashada ee Joe Biden
Wasiir ka tirsan dowladda Itoobiya oo ku eedeeyay ciidamada daacadda u...